Sida Alexa loogu xidho telefishanka iyo talooyinka isticmaalka | Forum Mobile
Daniel Terrasa | 11/05/2022 15:11 | Barnaamijyada
que Alexa waa kaaliye toos ah oo leh fursado aan la soo koobi karin waa wax qof kastaa hore u yaqaan. Waxa aan ku soo bandhigi doonno qoraalkan waa uun mid ka mid ah adeegyada iyo faa'iidooyinka badan ee ay siiso isticmaaleyaasheeda: ku xidh alexa iyo tv. Waxaan dooneynaa inaan aragno sida loo sameeyo iyo sidoo kale sababta xiriirka noocan oo kale ah uu u yahay mid xiiso leh.
Waxay u badan tahay in dad badani aysan marka hore arkin baahida loo qabo in lagu xiro Alexa iyo TV-ga gurigooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sababo badan oo sidaas loo sameeyo. Bilawga, waxaa jira faa'iidada awoodda isticmaal kaaliyaha amazon ee tv-ga, iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo mobiil ama ku hadla smart.
Isku xirkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan xakameyno TV-ga, beddelno kanaalka, raadinta, kor u qaadno ama hoos u dhigno codka, iwm. oo leh amar cod fudud. Kuwaas oo kala ah, nabad gelyo kontoroolka fog ee cimrigiisa.
Laakiin tan waxaa dheer, waxaa jira wax badan oo kale oo la samayn karo iyada oo la isku xidho Alexa iyo telefishanka. Tusaalaha caadiga ah ee isticmaalka: waxaan daawaneynaa filim TV-ga si lama filaan ah waxaan u baahanahay inaan ogaano magaca jilaa ama atariishada aan ku aragno shaashadda, ama sida cimiladu noqon doonto berrito, ama waxa natiijada aad jeceshahay Ciyaarta kooxda waa…. Waxaas oo dhan iyo waxyaabo kaloo badan ayaa noqon kara Weydii Alexa iyada oo loo marayo fogaanta. Jawaabaha su'aalahayaga waxay ka soo muuqan doonaan shaashadda.
Sidoo kale eeg: Sida loo habeeyo Alexa si uu u bilaabo shaqada
Waxaa jira laba hab, laba siyaabood oo kala duwan oo loogu xidho Alexa iyo TV. Midka ugu horreeya ee kuwan ka mid ah wuxuu ka kooban yahay u adeegida codsiyada waddaniga ah ee lagu dhisay Smart TV, ilaa iyo inta ay la jaan qaadayso Alexa. Habka labaad waxa uu maraa iyada oo la isticmaalayo qalab labaad oo lagu xidhi karo telefishanka laftiisa. Aynu si faahfaahsan u eegno labadaba:
1 Ku xidhidhiyaha abka hooyo ee Smart TV-ga
2 Isku xirka iyada oo loo marayo qalabka dibadda
Ku xidhidhiyaha abka hooyo ee Smart TV-ga
Iyadoo aan loo eegin sumadda TV-ga casriga ah, guud ahaan hababka isku xidhka ayaa aad isugu dhow, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara kala duwanaansho yar. Si kastaba ha ahaatee, the habka aasaasiga ah ka shaqeeya inta badan kiisaska waa sida soo socota:
Marka hore, waxaan furaynaa codsiga Alexa Qalabkayaga IOS ama Android
Kadibna ku dhufo tab "Qalabka", kaas oo inta badan ka muuqda dhinaca hoose ee shaashadda.
Waxaan dooranaa badhanka (+) si aan u doorano ikhtiyaarka hoose «Ku dar qalab».
Marka tan la sameeyo, waxaan hoos ugu dhaadhacnaa dooro TV.
Waxaan dooranaa summada TV-gayada casriga ah.
Ugu dambeyntii, si loo dhamaystiro habka qaabeynta, waxa kaliya oo hadhay in la raaco tilmaamaha gaarka ah ee codsiga Alexa.
Hoos waxaan ku sharraxaynaa tillaabooyinka lagu raacayo TV-yada smart-ka ee qaar ka mid ah noocyada caanka ah ee ugu caansan, mid walbana wuxuu leeyahay astaamo yaryar oo u gaar ah:
Ku xidhida sumadda LG smart TV oo leh Alexa waa hab aad u fudud:
Marka hore, waxaanu tagnaa dukaanka app-ka ee LG TV oo aanu raadino Alexa apps si loo rakibo.
Laga soo bilaabo taleefanka gacanta Waxaan ku galnaa akoonkeena Amazon, aqbalida shuruudaha iyo shuruudaha.
Marka tan la sameeyo, waa ku filan inaad raacdo tilmaamaha ka muuqda shaashadda.
Waxa lagama maarmaan noqon doona waa in la xakameeyo Fog Magic, kaas oo la socda micro isku dhafan oo si gaar ah loogu isticmaalo adeeggan. Isticmaalkeedu aad buu u fudud yahay. Waxa kaliya ee la xasuusto waa inaad riixdo oo aad haysaa badhanka fogaanta si aad u hadasho oo aad u gudbiso amarka codka Alexa.
Sida Alexa loogu xidho Samsung TV
Si aad Alexa ugu xidho telefishinka Samsung ee guriga, waa in aan raacnaa tillaabooyinkan fudud:
Waxaan marka hore soo dejisanay Samsung SmartThings app.
Iyadoo loo marayo app-kan, waxaan u adeegnaa ikhtiyaarka «Ku dar qalab» si aan u helno TV-gayaga.
Ka dib waxaan ku fureynaa codsiga Alexa ee qalabkayaga iOS ama Android. Aan tagno liiska "Dejinta" iyo gudaha Xirfado, Waxaan raadineynaa SmartThings si aan u hubinno in doorashadu karti u leedahay.
Hadda waxaan tagnaa shaashadda guriga ee Alexa oo riix tab "Qalabka", ku yaal xagga hoose.
Waxaan gujinaa badhanka (+) ka dibna daar "Ku dar qalab".
Si aan u dhammeyno, hoos ayaan u rogeynaa oo dhagsii "TV". Waxa kaliya oo hadhay in la helo summadayada Samsung Smart TV oo aan u doorano si loo dhamaystiro xidhiidhka.
Haddii ay tahay in guriga lagu haysto sumadda Sony ee smart TV, tani waa sida loo sii wado:
Tallaabada ugu horreysa ee la qaado waa in la riixo Inicio oo leh fogaanta TV-ga.
Liiska soo muuqda, waa inaad raadisaa oo doorataa ikhtiyaarka "Codsiyada" (mararka qaar waxay u timaadaa sidii "Apps-kaaga").
Marka xigta waxaan aadeynaa ikhtiyaarka "Kontoroolka TV-ga oo leh cod-bixiyeyaal caqli-gal ah", haddii ikhtiyaarka gaarka ah ee Alexa uusan si toos ah u muuqan.
Hadda waa inaad tagtaa Barnaamijka Alexa: marka hore dooro "Dejinta" iyo ka dib Xirfado. Halkaas ayaanu ku baadhna oo awoodnaa Xulashada "TV" ee Sony.
Si loo soo afjaro xidhiidhka, waxa hadhay oo dhan waa in la raaco tilmaamaha ka soo muuqan doona shaashadda.
Isku xirka iyada oo loo marayo qalabka dibadda
Isku xirka Alexa iyo Smart TV iyada oo loo marayo aaladaha dibadda
Haddii ay dhacdo in telefishankeennu aanu haysan wax codsi ah oo Alexa ah, waxaanu haysanaa beddelka Isticmaal qalabka isdhexgalka ee ay bixiso Amazon: Fire TV Stick Lite ama Fire TV Stick 4K, tusaale ahaan. Haddii aan go'aansanno inaan isticmaalno aaladahan, waxa ugu horreeya ee aan sameyno waa inaan hubinno in koontarooluhu ku daro makarafoon amarrada codka.
Xidhiidhku waxa lagu sameeyaa talaabooyinkan soo socda:
Si aad u bilawdo, waa inaad fur Alexa app Qalabkayaga IOS ama Android
Matoorka raadinta, waxaan ku qornaa «Dab damiska".
Ugu dambeyntii, waxaan riixeynaa "link" dhawr daqiiqadoodna sug in xidhiidhku dhammeeyo.
Sidoo kale eeg: Amarka sirta ugu qosolka badan Alexa
Gabagabadii, kuwani waa hababka ay tahay in aan sameyno ku xidh alexa iyo tv, sidaas awgeed waxaan ku raaxaysanaynaa khibradeena horteeda shaashadda si buuxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Sida Alexa loogu xidho telefishanka iyo talooyinka isticmaalka